Sirdoon: Sidee loo fuliyay dilkii Taliyihii Kastamyada Canshuuraha Puntland ee G. Mudug ?+Akhriso – Idil News
Sirdoon: Sidee loo fuliyay dilkii Taliyihii Kastamyada Canshuuraha Puntland ee G. Mudug ?+Akhriso
Magaalada Gaalkacyo ee xarunta Gobalka Mudug ayaa maalmihii ugu dambeeyay dib u marti-gelineysa dilal loo geysanayo Haldoorka iyo Masuuliyiinta Dowladda Puntland ee ku sugan Waqooyiga Gaalkacyo, kuwaas oo bilihii ugu dambeeyay ay ka reysteen Bulshada Reer Puntland ee Gobalka Mudug.
Jimcihii lasoo dhaafay ayaa waxaa Magaalada Gaalkacyo lagu dilay AUN Xasan Cabdille Hiraabe (Xasan Weyne) oo ahaa Taliyihii Kastamyadda Canshuuraha ee Wasaaradda Maaliyadda Puntland ee Gobalka Mudug, kana mid ah Haldoorka Gobalka.
Dilka Marxuum Xasan Weyne oo uu fuliyay Nin dhalinyaro ah oo ku hubeysan bistoolad, ayaa ka dhacay gudaha Hotel Al-Raxma ee Xaafadda Garsoor ee Magaalada Gaalkacyo, waxaana uu Marxuumku ku jiray gudashada Salaada Cishaha.
Hotelka Al-Raxma ee dilku ka dhacay ayaa ah mid Mashquul ah oo lagu caweysame, waxaana uu ku yaalaa dhabarka dambe ee Iskuulka BARDACAD, waxaana Ruuxii fuliyay dilka la sheegay inuu si degan goobta ugu baxay, isagoona aaday dhanka Koonfureed ee Magaalada Gaalkacyo oo uu ka arimiyo Maamulka Galmudug.
Ilo dhanka sirdoonka ah ayaa inoo sheegay in Marxuum Xasan Weyne, uu degnaa Hotelka muddo dheer, isagoona ahaa Ruux si weyn u feejigan, bartilmaameedna u ahaa Argagixisada, maadama uu ahaa Taliyaha Kastamyadda Canshuuraha Gobalka Mudug ee Wasaaadda Maaliyadda Puntland.
Sirdoonka ayaa sidoo kale inoo sheegay in Ninkii fuliyay dilka Marxuumka uu galay xaafadda Baraxley ee K/Gaalkacyo, halkaas oo ay ku yaalaan saldhigyo laga soo abaabulo dilalka iyo weerarada qorsheysan ee lagu bartilmaameedsanayo Haldoorka Puntland ee Gobalka Mudug iyo Masuuliyiinta Dowladda.
Ugu dambeyntii, Ilahan Sirdoonka ayaa muujiyay inay jireen dad ku sugnaa gudaha Hotelka oo la shaqeynayay dhagar-qabaha dilka geystay, waxaana ay tuhun galiyeen in ninka fuliyay dilka uu katirsanaa Maleeshiyaadka Argagixisada Al-Shabaab.
Dhanka kale, Dilalkii ka horeeyay kii jimcihii kana dhacay Gobalka Mudug oo loo tirinayay Kooxda Al-Shabaab ayaa ku cadaaday Beesha Sacad ee degta Koonfurta Magaalada Gaalkacyo, waxaana subaxdii jimcaha ka dhacay Gaalkacyo Shir u dhexeeya Waxgaradka Beesha Leelkase oo kasoo jeeday Marxuum Xasan weyne iyo Waxgaradka Beesha Sacad, kaas oo looga hadlayay dil madax duubasho ah oo dhawaan ka dhacay Gaalkacyo, kaas oo ugu dambeyntii ku cadaaday Beesha degta K/Gaalkacyo.
Si kastaba ha ahaatee, Puntland ayaa wada qorshayaal ay kor ugu qaadayso ammaanka Gobalka Mudug, waxaana jira hadal heynta ku aadan in Ciidamo cusub ay geynayso Magaalada Gaalkacyo, si ay uga hor-tagto dilal iyo weeraro argagixisadu maleegeyso, kuwaas oo qeybtood ay fashilisay dhowaan.